Shacabka Jubaland oo digniin udiray Soomaalida.
Talaado, 09 June 2015 12:45 | Qoraaga: Aden | Kismaayo ( Afdheer ) Shacabka Kismaayo ku nool ayaa shalay banaan bax ku taageeray go'aankii ay qaateen madaxda Jubaland.
Suldaan Lugadheere, Ugaas Cumar Xiirey, guddoomiyaha gobolka Jubbada hoose iyo guddoomiyaha degmada Kismaayo iyo xubno kale ayaa ka hadlay banaanbaxaas.
Suldaan Lugadheere ahna ku xigeenka 2aad ee madaxweynaha Jubaland ayaa dhaliilay madaxweynaha Soomaaliya isagoo sheegay in isir naceyb lagu diidan yahay Jubaland laakiin ay qaateen nidaam deegaan oo ay ka gudbeen 4.5 iyo qabiil, go'aanka qeylo quutayaashuna yahay mid sharci darro ah.
Ugaas Cumar Xiirey ayaa 24 saac u qabtay madaxweynaha Soomaaliya inuu jawaab cad ka soo saaro mowqifkiisa isagoo sheegay in isir naceyb lagu hayey Jubaland illaa bilowgii iyo maanta Haddii uusan is cadeyninna u qaadanayaan inuu la jiro baarlamaanka aan la dooran ee Muqdisho fadhiya.
Ugaas Cumar ayaa cod dheer ku sheegay in qabiil laga gudbay loona gudbay doorasho deegaan isagoo tilmaamay in lugadheere madaxweynaha Jubaland yahay hawiye, guddoomiyaha baarlamaanka Jubaland yahay Raxaweyn iyo xubno kale oo uu tilmaamay.
Ugaas Cumar ayaa sidoo kale Shariif Xasan madaxweynaha KG Soomaaliya u diray fariin isagoo uga digay fariimaha kasoo gaaray degmooyinka Yeed, Ato iyo ceelbarde isagoo sheegay inay Jubaland oo ay xudduud leeyihiin kusoo dari doonaan haddaysan xaqooda ka helin maamulka KG Soomaaliya Haddii kale lacag iyo baabuurba Jubaland haysato oo aan utageyno.
Marwo Qamar Deeq Khaliif wasiiradda haweenka iyo arrimaha qoyska dowlad goboleedka Jubaland ayaa banaan bixii shacabka Jubaland ee looga soo horjeestay go'aankii baarlamaanka federaalka dalka Soomaaliya ka sheegtay in ay kasoo horjeedan go'aankaas.
Wasiiradda ayaa sheegtay in baarlamaanka federaalka Soomaaliya yihiin kuwo aan matalin shacabka Soomaaliya laakiin baarlamaanka Jubaland ay soo doorteen dadka deegaanka iyo odayaashoodii oo aan laaluush lagu soo xulin.
Wasiiradda ayaa xildhibaan Jeesoow ku tilmaamay shaqsi liita oo sheegay in raggu isguursan karaan dumarkuna is guursan karaan hadalkaas oo ka hor imaanaya shareecada islaamka Jeesoow-na tv-ga iyo idaacadda kaga hadlo Jubaland kuna jiro baarlamaanka federaalka dalka Soomaaliya
Marwo Qamar ayaa dhaliishay aqoonta guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mr. Jawaari iyadoo sheegtay isagoo aqoon leh ( prof) soona arkay caakamka ilbaxay inuu Howsha qaranku u xil saaray gudan waayo.
Wasiirad Qamar ayaa ammaantay doorka taageero ee ay Puntland ku garab taagan tahay Jubaland.
Guddoomiyaha gobolka Jubbada hoose iyo guddoomiyaha degmada Kismaayo ayaa sidoo kale ka hadlay mowqifka reer Jubaland.
Shacabka Jubaland ayaa caddeysay in ay ku dhawaaqi doonaan gooni isutaag ama goosasho ay ka go'i doonaan Soomaaliya Haddii aan laga noqon go'aanka lagu diiday baarlamaanka Jubaland.